* Light Of Myanmar *: January 2008
Posted by * In Search of Truth * at 11:04 PM 46 comments Links to this post
ဒီမိုကရေစီကို မျက်ကန်းဝါဒီစိတ်ကြောင့် မဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်လို့ လိုချင်တယ်ဆိုရင်။ ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို တကယ်ရိုးသားစွာ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီး ကို On Viewer ရဲ့ ဒီဆွေးနွေးချက်လေးကို ၀င်ရောက် စဉ်းစားပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဆင့်နဲ့ အောက်တန်းကျနေရတဲ့ အမိနိုင်ငံကြီးအတွက် ပွင့်လင်းတဲ့အတွေးအခေါ်၊ ရိုးသားသော ဆွေးနွေးချက်နဲ့ မှန်ကန်သော စေတနာတွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါပြီ။ လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်တဲ့ ကို On Viewer နိုင်ငံအပေါ်စေတနာရှိတဲ့ Youth of Third Party အဖွဲ့နဲ့ သူတို့စာကို တင်ပေးတဲ့ ပိတောက်မြေကိုလည်း ဒီကနေ အလေးပြုပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 10:47 AM 12 comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 11:33 AM4comments Links to this post
ကိုကြောင်ချေးနှင့် ဒီမိုကရေစီသမားတို့ရဲ့ စကားဝိုင်း
(အတင်းပြောစစ်သားကြီး ကိုလျှာရှည် ဘလော့ကနေ ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
၂၀၀၇ ခုနှစ်ကြီးလဲကုန်တော. မယ်ခည။ ဒီတနှစ်အတွင်း ဆင်ဘယ်နှကောင်လောက် ဖမ်းပြီးပီလဲခည. ဇလီဖားတုံး
ဘယ်နှတုံးလောက် သွားကြားထိုးခဲ. ပီလဲဆိုတာ နှစ်ချုပ်ရှင်းတန်းလေး လုပ်သုံးသပ်ပီး မစားရ၀ခမန်းလေး တွေအင်တာဗျူးလေးတွေ အနှစ်ချုပ်လေးတွေ လုပ်ကြပါဦးခည။
ကြောင်ချေးတို. ကတော. ၂၀၀၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရ်ာလမ်းဘေးဈေးသယ်များ သမဂကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ. ဖွဲ.စည်းလိုက်ပါပီ ခညတော်လှန်ရေးကို အားဖြည်. ပေးမယ်ခည။ လမ်းစဉ်မူဝါဒအနေနဲ. လဲရှေးလွန်လေပီးသောအခါက ရဲရဲတောက်ကြီးများရဲ နည်းနာနိသ၁ယတွေ အတိုင်းပဲ..
၁။ အခါကြီးနေ. ကြီးများတွင မစားရ၀ခမန်း လေကြီးမိုးကြီး ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း
၂။ သံရုံးသံဆိုင်များအား လက်ရှိပြည်တွင်း အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြောပြခြင်း
၃။အသုဘအိမ်များ အလှူအတန်းများ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နေရာတိုင်းတွင် အကောက်ကောက်ခြင်း ဖဲဒိုင်ကိုင်ခြင်းအလှူရှင် ငြိုငြင်ပီး မောင်းထုတ်သည်. အခြေအနေသို. ရောက်ရန်ကြိုးစား အားထုတ်ခြင်း
၄။ ဈေးကျောင်းကားဂိတ် ဆိုက်ကားဂိတ် ဇရပ်. စသည်.လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ လူထုရေ. မှရဲရဲ့တောက် တိုက်ပွဲဝင်မည်ဟု ပြောဆိုစည်ရုံးခြင်း. လိုအပ်ပါက လူထုဧ။်ရှေ.မှ အသေခံမည်ဟု ပြောဆို စည်းရုံးခြင်း
၅။သတင်းဌာနများနှင်. အင်တာဗျူးခြင်း ဆင်ဖမ်းပီ ကျားဖမ်းပီဟု ၀ါဒဖြန် ခြင်း လိုအပ်ပါကအင်တာဗျူး နေစဉ်အတွင်း နှာသံတ၀က် ရှိုက်သံတ၀က်ဖြင်. မျက်ရည်ခံထိုးပြခြင်း
စသည်. ဘိုးတော် ဘေးတော် ဦးရီးတော် ဒွေးတော် နောင်တော် အဖွဲ.အစည်းများ တစိုက်မတ်မတ် ကျင်.သုံးခဲ.သော ဆုတ်ပိးရင်းဆုတ် ပြေးပီးရင်းပြေး ကွဲပီးရင်းကွဲ အော်ပိးရင်းအော် တောင်းပိးရင်းတောင်း ၀ါဒများကို ဆံချည်တမျှင်မှ အလွဲမခံပဲ ဆက်လက်ရ်ျ ဆက်ခံကျင်းသုံးသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ.ကြပါသည်။
အရေးတော်ပုံ မနက်ဖန်(သို.) ဘယ်သောအခါ ..... သာဓု သာဓု သာဓုပါခင်ဗျာ။။။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လမ်းဘေးဈေးသယ်များ သမဂ ၂၀၀၈
နအဖအပင်းဆို့တာပဲ စားမနေနဲ့ လူတွေကိုလဲ နဲနဲကြည့်။ မင်းပထွေးတွေ အလိုကျ သိပ်လုပ်ပြမနေနဲ့။ အချိန်တန်ရင် မြောင်းထဲရောက်မယ့် ၀ဲစား ကိုယ့်အမေကိုယ်သနားဦး။ မွေးထားတာလူ တိရစ္တာန်ဇတ်ခင်းမနေနဲ့။ လူဆိုတာ မှားတာ မှန်တာ သိရတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက စောက်ထုံ ဘွဲ့ပေးထားတယ့်လူတွေကို ဘုရားထူးမနေနဲ့။ စာမတတ်ပေမတတ် မြန်မာစာကိုအရင် မှန်အောင်ပေါင်း။ မင်းပထွေးတွေ တရုတ်ကုလားရုရှား အောက်ဆွဲဖြစ်နေတာ လူတိုင်းသိတယ်။ အသံကောင်းဟစ်မနေနဲ့။ ပြောရင်းနဲ့ပဲ ၂၀၀ရ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုကြီးကြောင့် ကုလသမဂ္ဂမှာ နအဖ မိစ္ဆာတွေ မျက်နှာ ဆီးရွက်လောက်နဲ့ အောက်ဆွဲနေရတယ်မဟုတ်လား။ အေးနောက်ထပ်လာ ဦးမယ်။ မင်းပထွေးတွေကတော့ ပြေးဖို့လမ်းရှာနေတယ်။ အောက်ဆွဲတွေပဲ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားထားကြ ။ သမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက် လူထုကို ဒုက္ခပေးတယ့် နအဖလို စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ပြုတ်ကျခဲ့တာချည်းပဲ။ သမိုင်းဆိုတာ မ အ အောင်သင်ရတယ်တယ့် ဒေါက်တာသန်းထွန်းပြောတာကို မှတ်ထား။ သိပ် မ အ နဲ့။
December 30, 2007 2:08 PM
December 30, 2007 6:57 PM
Posted by * In Search of Truth * at 3:41 AM0comments Links to this post